Malaimbandy: nalain’ny dahalo an-keriny ny mpampianatra iray sy ny zanany | NewsMada
Malaimbandy: nalain’ny dahalo an-keriny ny mpampianatra iray sy ny zanany
Nalain’ny dahalo an-keriny ny mpampianatry ny CEG iray sy ny zanany vavy, nandritra ny fanafihana tao Malaimbandy, distrikan’i Mahabo, afakomaly alina. Mbola any am-pelatanan’ny dahalo izy mianaka hatramin’ny omaly…
Indray niditra an-keriny tao an-tranon’ity mpampianatra, fantatry ny olona sy ny ankizy mpianatra any an-toerana amin’ny anarana hoe ramose Zera, mpampianatra taranja science de la vie et de la terre na SVT, ao amin’ny CEG Malaimbandy, distrikan’i Mahabo, faritra Menabe, ny dahalo maromaro nirongo fitaovam-piadiana mahery vaika tamin’io fotoana io. Araka ny fampitam-baovao voaray avy any an-toerana, ankoatra ny fanafihana ity mpampianatra ity, nalain’ireo dahalo an-keriny niaraka amin’ireo entana sarobidy tao an-tranony ramose Zera sy ny zanany vavy. Lasa nitsoaka avy hatrany ireo dahalo nitondra azy mianaka sady nanapoaka basy nampitahorana ireo mponina eo an-tanàna. Hatramin’ny omaly, tsy mbola fantatra mazava ny toerana nitondran’ireo malaso azy mianaka na efa manao izay ho afany amin’ny fikarohana aza ny mpitandro filaminana sy ny mponina any an-toerana.
Manao antso avo amin’ny tompon’andraikitra manoloana ity raharaha fakana an-keriny ity ny mpiara-miasa aminy ao Malaimbandy manoloana izao herisetra mianjady amin’ny mpampianatra izao. Nohamafisin’ny mponina ao Miandrivazo hatrany Malaimbandy fa mirongatra ny asan-dahalo amin’iny faritra iny ary tsy vao izao fa saika isan’andro, ahenoana trangana fanafihan-dahalo hatrany any an-toerana. Vokany, mitaintaina sy mandry an-driran’antsy hatrany ny mponina amin’ny afitsoky ny asan-dahalo.
Dahalo iray tratra…
Dahalo tsy fantatra isa nirongo fitaovam-piadiana mahery vaika koa, nanafika tao amin’ny fokontany Ankazomanga, kaominina ambanivohitra Bemanonga, distrikan’i Morondava, ny zoma hariva teo. Araka ny fantatra, lasan’ireo dahalo ny omby anjatony tao amin’ny fianakaviana iray. Nizotra niatsinanana ny lalan’ireo dahalo nandroaka ny omby. Fotoana fohy taorian’ny fanafihana, nanao fanarahan-dia avy hatrany ny zandary nampian’ny fokonolona ao an-tanàna. Nifanehatra tao amin’ny toerana antsoina hoe Benato, ny asabotsy tamin’ny 1 ora tolakandro, ireo mpanara-dia sy ny dahalo. Raikitra ny fifampitifirana ka maty nandritra ny fifandonana ny iray amin’ireo fokonolona nanara-daia. Dahalo iray kosa voasambotra. Nisy kosa ireo dahalo voatifitra, saingy nentin’ny namany nitsoaka. Tafaverina ny omby rehetra. Mitohy ny fanarahan-dia ataon’ny zandary.